ल्हाक्पा शेर्पा विश्वमै धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला - आजकी नारी - नारी
ल्हाक्पा शेर्पा विश्वमै धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला
नेपाली महिला दैनिक जसो कुनै न कुनै इतिहास रचेर नेपाली समाजका अन्य महिलाहरुलाई सफल सन्देश दिन हुन थालेका छन् । यस्तै साहासी कर्यमा पु:न सङ्खुवासभाकी ल्हाक्पा शेर्पा सातौँपटक सगरमाता आरोहण गरी विश्वमै सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला भएकी छन् । शेर्पाले शुक्रवार बिहान ५ बजे सगरमाथाको सफल आरोहण गर्न सफल भएकी हुन् । यो हप्ता मात्र ल्हाक्पा शेर्पा सहित तिन नेपाली महिलाहरुले इतिहास रचे । दृष्टिविहीन दुई नारीले विद्यावारिधि पूरा गरी नया इतिहास रचना गरेका छन् । लक्ष्मी पोख्रेल र श्वेता सिंहले आफ्ना नामका अगाडी डा. थप गरी आफ्ना नामका अगाडी डा. थपेर नामका अगाडी झुण्डिएका दृष्टिविहीन भन्ने शब्द सदाका लागि अन्त्य गरिदिए ।